मैले किन राजिनामा गरेँ ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > विशेष > मैले किन राजिनामा गरेँ ?
नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनी मेरो मात्र होइन निजी क्षेत्रकै ड्रिम प्रोजेक्ट हो । ८० प्रतिशत लगानी जुटिसकेको परियोजना अगाडि भने वढ्न सकिरहेको छैन ।
राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकालजस्ता कुराले काम गर्न केही कठिन भएको छ । तैपनि लगानी जुटाउनका लागि अग्रसर भइरहेका बेला मैले सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट राजिनामा गर्नु परेको छ ।
८० प्रतिशत लगानी ल्याउनका लागि संस्थापक तथा प्रबद्र्धकहरुबाट पनि २० प्रतिशत सेयर लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । ३५ अर्बको आयोजनाका लागि २० प्रतिशत अर्थात सात अर्ब रुपैयाँ हामीले हाल्नु पर्ने हुन्छ । आयोजना अगाडि लैजान सकिएन भने लागत बढ्दै जान्छ, जसले गर्दा लगानीको मात्रा थप्दै लैजानु पर्ने हुनसक्छ । हामी अहिले सात अर्ब जुटाउन लागिरहेका थियौं । तर राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणका कारण पैसा उठिरहेको थिएन ।
विभिन्न कारणले गर्दा लगानी जुट्न नसक्नु एउटा पक्ष भयो । तर, लगानी जुट्न नसकेको कुरालाई मूख्य विषयबस्तु बनाएर सिस्नेरी र कुलेखानीका पुराना लगानीकर्ताहरु जसले १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको सेयर हालेका थिए उनीहरुलाई उचालेर यहाँ राजनीति गर्न खोजिएको छ ।
तपाईले कुनै पनि हालतमा सक्नु हुन्न र तपाईले जे गरे पनि हामी मान्दैनौं भन्ने खालको कुरा केही सेयरधनीहरुले नियमित उठाइरहेका थिए । यो माग उनीहरुले स्वस्फुर्त उठाइरहेका थिएनन्, उनीहरुलाई कसैले व्याकअप गरिरहेको थियो । त्यहाँको सभासद सुभाष ठकुरी कहिले पनि हामीसँग सकारात्मक थिएनन् । उनले यसैलाई मुद्दा बनाएर राजनीति गरिरहेका थिए । अर्कोतिर हामीले नै स्वतन्त्र सञ्चालकका रुपमा लिएर आएको लाल केसी पनि मान्छे उक्साउने काममा लागे । उनी मलाई हटाएर आफू स्थापित हुन चाहिरहेका थिए ।
केसीले आफ्ना मागहरु वैधानिक रुपमा उठाइरहेका थिएनन् । उनले नियम कानुनको बाटोलाई मानेका थिएनन् । किनभने नियमसंगत रुपमा जाँदा कुनै पनि बिषय सञ्चालक समितिमा आउनु पर्छ । सञ्चालक समितिमा मेरो पक्षको वहुमत भएकाले उनले नियमसंगत बाटो छाडेका हुन् । बहुमतले नसक्ने भएपछि बलमिच्याइ गरेर, मान्छेहरु ल्याएर, भिडाएर तर्साउने गतिविधि उनले सुरु गरे ।
मेरो घरमा फोन गर्ने, तलाई म जहाँ गएपनि छाड्दिन हातखुट्टा भाँचिदिन्छु भनेर एसएमएस गर्ने उहाँहरुले गर्नु भयो । डर त्रास देखाउने काम भयो ।
उनको गतिविधिका कारण सञ्चालक समिति कसरी चल्छ ? यो तरिका ठिक होइन भन्ने मेरो कुरा थियो । मैले सकिन भन्ने लाग्छ भने तपाई अगाडी वढ्नुस् नतसम्म मैले भने । मेरो राजिनामाको निकासले यदि बाटो बन्छ भने मलाई आपत्ति छैन । मलाई नाम पनि चाहिएको होइन । मलाई दाम पनि चाहिएको होइन । मलाई काम मात्र चाहिएको हो । त्यो आधारमा गर्न सक्ने कुनै प्रस्ताव छ भने लिएर आउनुस् भनेर मैले केसीलाई भनेको थिएँ ।
तर उहाँ त अराजक गतिविधिमा उत्रनु भयो । बलपुर्वक भयो भने कुनै पनि कर्पोरेट अगाडी वढ्न सक्दैन । फ्याक्ट्री बन्द गर्ने, हुलहुज्जतमा उत्रने, मान्छे कुटपिट गर्ने खालका गतिविधि विगतमा हुन्थे त्यो संस्कार हुर्किएर अहिले यति ठूलो कर्पोरेटमा पनि छिर्यो । यसको पछाडी पक्का पनि व्याकअप छ । उनीहरुले हुलहुज्जत गरे भनेर हामीले पनि गर्ने त होइन । त्यस्तो कसैले गर्छ भने हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउने हो । हामीले त्यही गर्यौं । कर्मचारी बन्दी बनाए, कार्यालय बन्द गरे हामीले त्यसको जानकारी सिडिओलाई गरायौं । पाँच दिनसम्म कम्पनी बन्द भयो । हामी कानुनी प्रकृयामा गयौं, उहाँहरु भने बलमिच्चाइ गरेर जान खोज्नु भयो ।
मेरो घरमा फोन गर्ने, तलाई म जहाँ गएपनि छाड्दिन हातखुट्टा भाँचिदिन्छु भनेर एसएमएस गर्ने उहाँहरुले गर्नु भयो । डर त्रास देखाउने काम भयो । मैले त्यसको जानकारी प्रहरीलाई गराइसकेको छु ।
एकातिर बलपुर्वक भयो । अर्कोतिर मैले छाडेपछि बाटो बन्छ भन्ने कुरा आएपछि मैले राजीनामाबाट निकास दिन खोजेको हो । तर राजिनामामा मेरा केही सर्तहरु छन् ।
मैले छाडेपछि आयोजना कसरी बनाउने भन्ने प्रस्ताव ल्याउन भनेको छु । त्यो प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा आउँछ । उनले ल्याएको बाटो बनाउने प्रस्ताव सञ्चालक समितिलाई चित्तबुझ्दो लागेमा मेरो राजिनामा स्वीकृत गर्ने सर्तसहित राजिनामा गरेको हुँ । राजिनामामा पनि यहाँ राजनीति गर्न खोजियो । सञ्चालकमा मात्र सीमित रहेको त्यो शिलबन्दी राजिनामाको खाम दर्ता गराएको थिएँ । त्यो खोलिएको थिएन । तर उताको पक्षले जवरजस्ती खाम खोसेर च्यात्यो । र, त्यसलाई सार्वजनिक गर्यो ।
मेरो राजिनामाको समाचार वाहिर आएपछि मलाई लगानीकर्ताको दवावहरु आउन थालेको छ । मेरा कारणले पुर्वाधारमा पैसा हालेकाहरुले हामीलाई नसोधि किन राजिनामा गरेको ? हाम्रो सेयर डुब्छ भन्न थालेका छन् । मैले त्यसको उत्तर त दिनु पर्छ । मैले दिइरहेको पनि छु ।
मैले भनिरहेको छु– बाटो बन्छ भन्ने आधारमा राजिनामा गरेका हो । बाटो बन्ने विश्वस्त प्रस्ताव नआए राजिनामा पारित हुँदैन । Bizmandu
२०७२ माघ २८ गते १७:०४ मा प्रकाशित
अखिलको २२ औ महाधिवेशन सुरु
सुशीलका निजि चिकित्सकले पत्रकार सम्मेलन गरेरै भने
काठमाडौँ उपत्यकाका ४ वटा स्मार्ट सिटीको बन्यो डीपीआर, लागत अनुमान ५ खर्ब
आईसीबीसी बैंकका ६ कर्मचारी पक्राउ
सेयर बजारको निरन्तर ओरालो सम्झेर नआत्तिनुस्, यो साता थाहा हुन्छ !
हाइड्रो कम्पनीको करिब ४१ लाख कित्ता साधारण सेयर आउँदै, तपाई पनि आवेदन दिने हैन त !